Somaliland: "raali kama noqoneyno in hawadeena meel kale laga maamulo" - BBC News Somali
Somaliland: "raali kama noqoneyno in hawadeena meel kale laga maamulo"
Image caption Madaxweyne Farmaajo oo qaar ka mid ah shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ay u sharaxayaan sida qalabka uu u shaqeynayo
Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa si adag uga diiday in "Soomaaliya ay wada maamusho hawada".
Maareeyaha hay'adda duulista iyo madaarrada Somaliland, Cabdi Maxamed Rodol oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in Heshisyadii horey ee lagu saxiixay Turkiga ay dhigayeen in labada magaalo ee Muqdisho iyo hargeysa la geeyo qalabka maamulka hawada.
"Waxaa jiro heshiisyo hore oo la galay… waxaa qeyb ka ahaa in hawada aan wada maamulanno, qalab la geeyo Muqdisho, qalab kalena la keeno hargeysa oo la dhameystiro Desembar".
"Waxaa nasiib darro ah, Soomaaliya ayadoon wada tashi iyo heshiis galin, in ay keligood ku dhawaaqeen in ay hawadii oo dhan la wareegeen. Taasina waa in marnaba aysan Somaliland ka raali noqoneyn in hawadeeda meel kale laga maamulo".
Somaliland oo diiday in Muqdisho laga maamulo hawada Soomaaliya
Madaxweynaha wuxuu tilmaamay, "Arrintaasi waxay ku timid shaqo iyo juhdi badan oo la geliyay. Halkan waxaan ku haystaan qalab ka casrisan midkii hawadeena lagu maamulayay ee yaalla Nairobi."
Madaxweynaha Soomaaliya "In aan koontaroolno baddeena, hawaddeena iyo xuduuddaheena waa waajibaadka iyo astaamaha lagu yaqaano qaran"
Posted by BBC News Somali on Thursday, 28 December 2017